Manifestation à Montceau-les-Mines – La Communauté Birmane De France
Manifestation à Montceau-les-Mines
Le samedi 19 Juin 2021, date d’anniversaire de Madame Aung San Suu Kyi, une manifestationaété organisée par La Communauté Birmane de France dans la ville de Montceau-les-Mines.
Nous remercions chaleureusement Madame Marie-Claude Jarrot pour son discours en soutien au peuple birman, ainsi que Messieurs Stéphane Vilpoux et Serge Touati pour leur aide précieuse.
Merci également à toutes les personnes présentes et qui ont contribué au succès de cet évènement.
19 June အတွက် ပြင်သစ်ရောက်မြန်မာများအဖွဲ့မှကျင်းပခဲ့သော ပန်းသပိတ်
ဇွန် လ ၁၉ ရက်နေ့မှာတွင် ပြင်သစ်ရောက်မြန်မာများမှ ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ အလယ်ပိုင်း Burgundy နယ်မြေမှာရှိတဲ့ Monceau Les Mines အမည်ရတောင်ပေါ်မြို့လေးတမြို့တွင် မြန်မာစစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၇၆ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက် ပန်းသပိတ်ကိုအောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
ဒီပွဲမှာ မြို့တော်ဝန် (Mrs.Marie-Claude Jarrot) လာရောက်ချီးမြှင့်အားပေးခဲ့ပြီး သူမဟာ သိပ်မကြာခင်ကပင် မြန်မာပြည်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကို အလွန်လေးစား သဘောကျ ချစ်ခင်သူတစ်င်္ဦးဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့ အပြင် မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး ရံပုံငွေအတွက်ရောင်းချပေးနေသော အမှတ်တရပစ္စည်းများကိုလည်းသူမ ကိုယ်တိုင် ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်‌ရောက်မြန်မာများအဖွဲ့ ပန်းသပိတ်ကို နယ်ခံ စာနယ်ဇင်းသတင်းသမားများလည်းလာရောက်သတင်းယူခဲ့ကြပြီး(Monceau News) ဂျာနယ် မှာ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း သတင်းများ ကို ဓါတ်ပုံများဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အောက်ပါ Link တွင်လည်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Dialogues en HumanitéManifestation à Paris 12 June